Nhau - Maitiro Ekusarudza Anomanikidza Pfuti Yemvura
Nekuwedzera kwevaridzi vemota, mutengo wekuwacha mota wakwidzawo. Vazhinji varidzi vemota vadiki vakachinja maitiro avo kusarudza yakachipa, inokurumidza, iri nyore, uye inochenesa nharaunda. Kana uchigeza mota kumba, zvinodawo kuti uve nemota yekugeza mvura pfuti. Paunenge uchitenga mota yekugezesa pfuti yemvura, brand brand inokoshesa. Saka ndeipi mhando yemota yekugeza mota pfuti iri nani? Vamwe varidzi vemota vanotenga imba yekugeza mota yakamanikidza pfuti yemvura, uye vamwe varidzi vemota vanotenga inotakurika mota washer. Ngatitarisei kuti tingatenga sei yakamanikidza mvura pfuti yekuwacha mota dzemumba.
Kana vanhu vakatsvaga pane akasiyana mawebhusaiti ekutenga uye vakaona kuti kune akawanda mabhureki emvura yakakwira yekumanikidza pfuti yekuwacha mota dzemhuri, uye musiyano wemutengo zvakare wakakura kwazvo. Dzimwe dzinodhura makumi maviri kusvika makumi matatu emauwani, nepo dzimwe dzichidhura kusvika pamazana maviri kusvika mazana matatu emauan. Mukupindura kumibvunzo yakadai se "Ndeipi mhando yemhando yepamusoro yekumanikidza pfuti yekuwacha mota yakanaka", isu takaunganidza rumwe ruzivo kwauri.
Imba yemumba inoshambidza yakamanikidza mvura pfuti chinhu chepamusoro-kumagumo chinoshanda chekuchenesa chakanyatsogadzirirwa mota dzemhuri, icho chine zvakanakira kuchengetedza mvura, kumanikidza, uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza. Parizvino, kune akawanda mabhureki emvura yakakwira yekumanikidza pfuti yekuwacha mota inotengeswa online, mabrandi ane mhando dzinovimbika kunyanya anosanganisira Huber, Tiger Knight, Gabriel, naOrichi.
Zvakanakira kukwirisa kwepfuti dzemvura yekuwacha mota dzemumba
Kushandisa kuri nyore ndiko mukana wakakura wepombi yekumanikidza yemvura yekuwacha mota dzemumba. Kana pasina pfuti yepamusoro-yekumanikidza yekuwachisa mota yemumba, yedu yekuwachisa mota inozonetsa. Pasina pfuti yemvura yakamanikidza yekuwacha mota, isu tinokwanisa chete kugeza mota nebucket kana tichigeza mota. Izvi zvinofanirwa kunge zvakaneta kwazvo. Kana isu tine pfuti yemvura, tinogona kunzvenga dambudziko iri, kuitira kuti tikwanise kuchengetedza simba kana tichigeza mota, uye hatifanire kumhanya tichitenderera nemugomo. Iyo yekuwacha mota nepfuti yemvura zvakare yakachena, uye zviri nyore kuchenesa mota. Kana uchishambidza mota mumugomo, mvura yacho haisi nyore kuoma, uye zvikamu zvemotokari zvinoshatiswa nyore nyore nemvura.
2. Chengetedza Mvura
Pakushambidza mota, mvura ndiyo yakanyanya kushandiswa. Patinogeza mota nebucket, mota inogezwa kunge mafashama. Saka kuchengetedza mvura kwakakosha kwazvo kwatiri. Shamwari zhinji dzemotokari dzichataura kuti havana hanya nemvura. Iwe hauna basa asi mota yako ine hanya. Kana paine mvura yakawandisa mumuviri, inopinda nyore nyore mune mamwe mativi emota. Kana isu tatanga, zvinonyanya kuitika kusashanda. Mota yemwenje mwenje muenzaniso wakanaka. Muzviitiko zvakawanda, kukuvadzwa kwemarambi emota kunokonzerwa nemvura inopinda mumumvuri wemwenje.
Nzira yekusarudza imba yakamanikidza pfuti yemvura?
Panguva ino, chakanyanya kukosha kutenga pfuti yemvura yakamanikidza zvinhu, mashandiro uye ruzivo, kwete chiratidzo. Tevere, isu tichagovana newe chimwe chiitiko uye hunyanzvi mukutenga yakanyanya kumanikidza pfuti dzemvura yekuwacha mota dzemumba.
1.Tarisa pamubhedha wepombi yekumanikidza yemvura.
Iyo kamwene kekushambidza mota yakakwira-kumanikidza pfuti yemvura haisi yakapusa, chaizvo zvine ruzivo. Chinhu chinonyanya kushushikana chepfuti yemvura yakamanikidza ndiyo kamwene. Zviri nani kusarudza kamwene akagadzirwa nendarira.
2.Tarisa paipi yepombi yekumanikidza yemvura.
Iyo hosi yeiyo yakanyanya-kumanikidza pfuti yemvura inofanirwa kunge isinga pesane nekumanikidza, kutonhora, kupisa kwakanyanya, ngura uye kuchembera Matipi: Yakaderera-yakakwira-yekumanikidza hosi yakapfava. Mushure mekuzadzwa nemvura yemhando yepamusoro, vanozoputika nyore nyore pavanopwanywa nemavhiri, uye vanozokwegura zviri nyore mushure mekushandiswa kwenguva yakareba. Zviri nani kusarudza hosi yekuwachisa mota yakagadzirwa neEVA kana PVC.
3.Tarisa kumanikidza kwemvura kwepamusoro pekumanikidza pfuti yemvura.
Zvinozivikanwa kuti kana uchichenesa nepfuti yemvura yakamanikidza, kunyangwe kuchenesa kwakachena kunoenderana nekuti mvura yakadhonzwa yakasimba here. Kana iyo yakasaswa mvura yekumanikidza iri diki, inozokanganisa zvakanyanya kumhanyisa yekumhanyisa uye yakakwira-yakamanikidza pfuti yemvura ine mhando yakanaka inogona kazhinji kuburitsa yakasimba mvura kumanikidza, kuitira kuti izadzise chinangwa chekukurumidza uye zvachose kubvisa matsi emota.
4.Tarisa pane inoenderana neyeye yakanyanya kumanikidza mvura pfuti.
Hunhu hwemvura pfuti interface zvinhu zvinokanganisa zvakananga hupenyu hwebasa reiyo yakamanikidza mvura pfuti. Iyo yepamusoro yemhando yekumanikidza pfuti yemvura inowanzo shandisa ese-emhangura zvinhu sezvinhu zvemusoro wepfuti yemvura uye pombi yemvura pombi, nepo mota yakachipa inoshambidza yakakwira-yakamanikidza mvura pfuti inowanikwa inowanzo gadzirwa nepurasitiki. Inowanzoitika kumvura inodonha uye kusimba kwakasimba.
5.Care iyo yekurumbidza chiyero uye yekutengesa vhoriyamu yakakwira yakamanikidza mvura pfuti
Kana munhu akaronga kutenga yakakwira-yekumanikidza pfuti dzemvura kana mota washer online, anogona kutarisa kutengesa uye kwakanaka ratings dzeakakwira anodzvinyirira epfuti dzemvura. Iyo yekutengesa uye yekurumbidza mwero wepombi-yekumanikidza pfuti yemvura yekushambidza mota dzemota inomiririra kune imwe nhanho iyo sosi iyo iyi washer yemota inozivikanwa nevaridzi vemota.